Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Osteoporosis အရိုးပါးရောဂါ
Post Before “read more” Sun, Aug 18, 2013 at 9:43 PM ကျွန်တော့် အမေက ရန်ကုန်မှာနေပါတယ်။ အသက်က ၅၈ နှစ်ရှိပါပြီ။ ရောဂါဖြစ်တာက အောက်ပိုင်း ပူတဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေထောက်တွေပူတယ်။ ဆေးထိုးဆေးသောက် လုပ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပါတတ်ခန့်က အရိုးကို စစ်တဲ့စက်ဆိုလား အခမဲ့စစ်ပေးတယ်ဆိုလို့ စစ်ကြည့်တာ အရိုးပါးတာ အဆင့် ၃ ကိုရောက်နေပြီပြောပါတယ်။ အဲတာနဲ့ ဆေပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့။ တစ်ပါတ်ကို တစ်လုံးသောက်ရတဲ့ဆေး။ အရိုးပါးရောဂါ ဖြစ်တဲ့သူ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်လေးတွေ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော်က နိုင်ငံခြားမှာဆိုတော့ အဝေးကပဲဂရုစိုက် နိုင်ပါတယ်။
• အမျိုးသမီး၊ အသက်ကြီးသူတွေမှာ အဲလိုဖြစ်တာကို Osteoporosis (အော်စတီယို ပိုရိုးဆစ်) လို့ခေါ်တယ်။ တခြားနာမည်တွေလဲရှိတယ်၊ Thin bones အရိုးပါးခြင်းနဲ့ Low bone density အရိုးသိပ်သည်းဆနည်းခြင်း။
• အရိုးအားနည်းတာပြောလဲ မှန်တယ်။ အားနည်းတော့ ကျိုးလွယ်မယ်။
• အရိုးရောဂါထဲမှာ အများဆုံးဖြစ်တာလို့ ပြောနိုင်တယ်။
• Calcium (ကယ်လ်စီယမ်) နဲ့ တခြားဓါတ်တွေကို စစ်ဆေးရင် နည်းနေတာတွေ့ရမယ်။
• (ကယ်လ်စီယမ်) က လူကြီးပုံမှန် 9.0 to 10.5 mg/dL နဲ့ ဒါမှမဟုတ် 2.25 to 2.75 mmol/L လို့ အဖြေထွက်မယ်။
• ကလေးဆိုရင် 7.6 and 10.8 mg/dL ဒါမှမဟုတ် 1.9 to 2.7 mmol/L လို့ အဖြေထွက်မယ်။
• အမျိုးသမီးတွေ အသက် ၅ဝ ကျော်လာရင် တဝက်လောက်မှာဖြစ်တယ်။ အရိုးတခုခုကျိုးပြီး ဆေးရုံ ရောက်လာကြတယ်။
• အရိုးဆိုတာ အသက်ရှိနေသ၍ အသစ်ဖြစ်လိုက်၊ အိုဟောင်းလိုက်၊ သေသွားလို့ အစားထိုးလိုက်နဲ့ သံသရာ လည်နေတယ်။ အသစ်အစားမထိုးနိုင်လာရင် ဒီရောဂါဖြစ်လာမယ်။
• Calcium (ကယ်လ်စီယမ်) နဲ့အတူ Vitamin D ဗီတာမင် (ဒီ) လဲ အတူတူလိုတယ်။
• တချို့လူမျိုးတွေမှာ၊ တချို့မိသားစုတွေမှာ ပိုဖြစ်ကြတယ်။
• အမျိုးသမီးတွေမှာ Estrogen ဟော်မုန်း၊ အမျိုးသားတွေမှာ Testosterone (တက်စတိုစတီရုန်း) ဟော်မုန်း နည်းလာချိန်ဖြစ်တဲ့
• တချို့ရောဂါတွေအတွက်ပေးနေရတဲ့ ဆေးတွေကြောင့်လဲ ဖြစ်တယ်။
• အိပ်ယာထဲ အကြာကြီးလဲနေရသူတွေ၊ အရက်သောက်များသူတွေ၊ ပိန်သူတွေ၊ ဆေးလိပ်သောက်သူတွေမှာ ပိုတွေ့ရတယ်။
• ရောဂါရှိနေပေမဲ့ ဘာမှ မခံစားရတာကများတယ်။ အရိုးကျိုးမှ စစ်တော့သိလာရတတ်တယ်။
• ခါးရိုးထဲက နာတာကြာသူတွေ စစ်သင့်တယ်။
• ရောဂါဖြစ်လို့ကြာရင် တချို့က အရပ်ပုသွားကြတယ်။
• Bone mineral density testing စစ်ဆေးနည်းလုပ်ရတယ်။ DEXA scan နည်းလုပ်တာများတယ်။
• အရိုးတွေကို ဓါတ်မှန်လဲရိုက်တယ်။ မကျိုးဘဲရိုက်ကြည်တာနဲ့တော့ မသိနိုင်ပါ။
• Lifestyle changes လူနေမှုပုံစံပြောင်းရတော့မယ်။ အစားအသောက်ပြင်ပါ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
• ကယ်လ်စီယမ် နဲ့ ဗီတာမင် (ဒီ) သောက်ပါ။
• Bisphosphonates ဆေးကို အများဆုံးပေးတယ်။ Estrogens, Teriparatide, Raloxifene, and Calcitonin တွေလဲ ပေးနိုင်တယ်။
• အမျိုးသမီးတွေ ၄၅-၅ဝ နှစ်ဝန်းကျင် သွေးဆုံးချိန်မှာ ဒီရောဂါဖြစ်လာတယ်။
• အသက် ၅၁ ကနေ ၇ဝ ဆိုရင် (ကယ်လ်စီယမ်) 1,200 mg of calcium နဲ့ ဗီတာမင် (ဒီ) 400 - 800 IU နေ့စဉ် လိုတယ်။
• ယောက်ျား အသက် ၅၁ ကနေ ၇ဝ အတွက် ကယ်လ်စီယမ် 1,000 mg နဲ့ ဗီတာမင် (ဒီ) 400 - 800 IU နေ့စဉ် လိုတယ်။
• ဆေးလိပ်၊ အရက် လျှော့ပါ-ဖြတ်ပါ။ ချော်လဲမှာမှန်သမျှ သိထားပါ။
• ပင်လယ်ငါးများ၊ အရိုးပါစားလို့ရတဲ့ငါးတွေ၊ နွားနို့၊ ဒိန်ခဲ၊ တို့ဖူး၊ ဘဂီကူလီ ခေါ်တဲ့မုံလာပွင့်အစိမ်းရောင်တွေမှာ ကယ်လ်စီယမ် ပါတယ်။
• ခွဲစိတ်ကုသဘို့လိုသူတွေကို Kyphoplasty နည်းနဲ့ Spinal fusion နည်းလုပ်ရတယ်။
Kidney Stone Causes ကျောက်ကပ်ကျောက် ဘာတွေကနေဖြစ်စေသလဲ
1. Calcium (ကယ်လ်စီယမ်)၊
2. Other electrolytesတခြားဓါတ်ဆားများ၊
3. Animal protein တိရစ္ဆာန် (ပိရိုင်း)၊
4. Vitamins ဗီတာမင်တွေ နဲ့
5. Other တခြားအကြောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။
Calcium (ကယ်လ်စီယမ်) ဓါတ်ဆားကို ကျောက်ကပ်ကျောက်ထဲမှာ အများဆုံးတွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် (ကယ်လ်စီယမ်) ဖြည့်စွက်ဆေးအဖြစ်သုံးသူတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium (2011) ထဲမှာ ရေးထားတယ်။
ကလေးတွေကို (ကယ်လ်စီယမ်) ပေးရင် နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ထက် မပိုစေရပါ။ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက် -
• Infants ၁ နှစ်အောက်ကလေး = 400-600 milligrams
• ၁ နှစ်က ၁ဝ နှစ်ကလေး = 800 milligrams
• ၁ဝ မှ ၁၅ နှစ်ကလေး = 1200-1500 milligrams